Fiangonana Fjkm Misoratra anarana mialoha ireo mpivavaka
Miditra'in efatra ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fiangonana Fjkm sasany taorian'ny fanapahan-kevitry ny foibe.
Amin ny 6ora sy sasany , amin ny 8ora masy sasany. Amin ny 9 ora sy sasany ary amin ny 11ora atoandro Ny tsirairay dia misoratra narana ary maka "ticket" mialoha any amin'ny biraom-piangonana na ny sekretera. Nanomboka omaly zoma sy sabotsy manomboka amin ny 8ora maraina ka hatramin ny 12 ora atoandro. Ary io no isafidianan'ny tsirairay ny ora hivavahany ; tsy maintsy hajaina ny fepetra toa ny fanaovana arotava ny fanasana tanana amin'ny gel hydroalcoolique , ny fanajana ny elanelana 1 metatra.Mbola mampahafantatra ny toromarika ihany koa ireo diakona.Ankoatr'izay maro ihany koa ny Fiangonana Fjkm no efa namerina ny fotoam-pivavahana vao maraina na ny maraim-baovao izay miditra amin'ny 6 ora.